ဇလုံတောင် ​တောင်တက်ဘုရားဖူကား ဘရိတ်ပေါက် တိမ်းမှောက်ပြီး ၃ ဦး​နေရာတွင်​​သေဆုံး…. - Real Gaming Myanmar
ဇလုံတောင် ​တောင်တက်ဘုရားဖူကား ဘရိတ်ပေါက် တိမ်းမှောက်ပြီး ၃ ဦး​နေရာတွင်​​သေဆုံး….
ဗန်းမောက်မြို့နယ်ဇလုံတောင် ​တောင်တက်ဘုရားဖူကား နေ့လည် ၂:၀၀ ကျော်လောက်မှာ အဆင်းဘရိတ်ပေါက် တိမ်းမှောက်ပြီး …ကား​ပေါ်ပါ ၂၁ ဦးအနက်​ ၃ ဦး​နေရာတွင်​​သေဆုံး တချို့မန္တလေးဆေးရုံကြီးလွှဲပို့နေတယ် …ကျန်သူတွေဆေးရုံမှာကုသနေပါတယ် …. ။
အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ရာမှာဆုံးပါးသွားသူမှာ ရန်ကုန်တိုင်း ပုလဲမြို့နယ် ကလို့ပဲသိရှိရပြီး သေဆုံးသူရဲ့မိသားစုအားစုံစမ်း၍မရသေးပါ ….. ။သိရှိသူများမှ ဤပို့စ်အားတွေ့မြင်ပြီး ကာယကံရှင်များအားအကြောင်းကြားပေးနိုင်ပါရန်နှင့်ဗန်းမောက်မြို့နယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သို့အမြန်ဆက်သွယ်နိုင်ပါရန်….
ဝိုင်းဝန်းကူညီ Share ပေးကြပါခင်ဗျာ။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09444541451 စခန်းမှူးဦးလေးမြင့်သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းပါခင်ဗျာ…။
crd – KoPhoeZaw
ဗနျးမောကျမွို့နယျဇလုံတောငျ ​တောငျတကျဘုရားဖူကား နလေ့ညျ ၂:၀၀ ကြျောလောကျမှာ အဆငျးဘရိတျပေါကျ တိမျးမှောကျပွီး …ကား​ပျေါပါ ၂၁ ဦးအနကျ​ ၃ ဦး​နရောတှငျ​​သဆေုံး တခြို့မန်တလေးဆေးရုံကွီးလှဲပို့နတေယျ …ကနျြသူတှဆေေးရုံမှာကုသနပေါတယျ …. ။
အကျဆီးဒငျ့ဖွဈရာမှာဆုံးပါးသှားသူမှာ ရနျကုနျတိုငျး ပုလဲမွို့နယျ ကလို့ပဲသိရှိရပွီး သဆေုံးသူရဲ့မိသားစုအားစုံစမျး၍မရသေးပါ ….. ။သိရှိသူမြားမှ ဤပို့ဈအားတှမွေ့ငျပွီး ကာယကံရှငျမြားအားအကွောငျးကွားပေးနိုငျပါရနျနှငျ့ဗနျးမောကျမွို့နယျ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့သို့အမွနျဆကျသှယျနိုငျပါရနျ….
ဝိုငျးဝနျးကူညီ Share ပေးကွပါခငျဗြာ။ ဆကျသှယျရနျဖုနျး-09444541451 စခနျးမှူးဦးလေးမွငျ့သို့ဆကျသှယျမေးမွနျးစုံစမျးပါခငျဗြာ…။
Previous: လက်ထပ်ဖို့ မစဉ်းစားသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပုံစံ…
Next: ရဟန်းအယောင်ဆာင် ဘုန်းကြီးအတုတွေ နာပြီ